Fifindrana tao amin'ny fiangonana vaovao misy rihana – FJKM Ambavahadimitafo Fifindrana tao amin'ny fiangonana vaovao misy rihana |
Fifindrana tao amin'ny fiangonana vaovao misy rihana
Notanterahana tamin’ ny alahady 6 mey 2007 maraina teo ny fiverenana tao amin’ny tempoly nohavaozina rehefa niasa nandritra ny volana maromaro ny Komity Faha-X taona sy ny mpanao mari-trano ary ireo mpiara-piasa taminy rehetra.
Manomboka izao izany dia indray mandeha isaky ny alahady ihany ny fanompom-pivavahana ka ny fidirana dia amin’ny 9 ora maraina isaky ny alahady tsotra; ary amin’ny 8 ora kosa rehefa alahady fandraisana sy fotoan-dehibe.
Nialohan’io fotoana io dia nisy fivavahana fangatahampitahiana ho amin’ny fifindrana natao ny 28 aprily 2007 teo.
Fotoam-pivavahana manotrokotroka no notanterahana noho izany fifindrana izany. Nisy ny fanapahana ribà izay notanterahin’ny mpitandrina sy ny Filohan’ny Komity faha-X taona nialoha ny fotoam-pivavahana. Tena maro be tokoa ny olona tonga nanatrika izany fotoan-dehibe izany.
Araka ny isa voaray avy amin’ny Sampana Tanora Kristiana (STK); izay nisahana ny fanisana; dia nahatra 1026 ny isan’ny olona tonga niangona : 520 taty ambany ary 506 kosa tany ambony.
Marihana fa mety mahazaka olona eo amin’ny 1300 eo ny tempoly nohavaozina. Mbola nisy olona ihany anefa tany ivelany, na dia izany aza; asa na noho ny hafanana na ahoana. Fa ny azo lazaina aloha dia tratra ny tanjona tamin’ny fanorenana ny rihana mba hampitombona ny toerana ao am-piangonana iny.
Rehefa nirava ny fiangonana dia nozaraina « mamy kely – chocolat » ny mpiangonana tsirairay avy.
Raha ny heno dia mahafaly ny olona tokoa ny fanamboarana natao.